Google Ads Audit : Nweta nyocha Google Mgbasa ozi maka n'efu
Nweta ikpeazụ dobe nke gị ads mkpọsa na Clever Google Ads Audit
Mee ka arụmọrụ Google Ads ozi Google Ads gị dịkwuo mma.
Nyochaa mgbasa Google Ads ozi m n'efu ugbu a
Kwado mgbasa Google Ads ozi Google Ads gị naanị na nke abụọ.
Na ntabi anya. Clever oditi akara ule gị n'ọrụ Google Ads mkpọsa. Ugbu a i nwere mmalite, setịpụ ebumnobi.
The ozi na ị chọrọ. Na otú iji ya.
Clever oditi na-atụ aro na ndozi-ebuli gị na Google Ads mkpọsa arụmọrụ site na njikere na-eji atụmatụ na-atụ aro. A haziri ndụmọdụ ndị a dabere na mmetụta ha nwere na arụmọrụ gị.
Tee oganihu otu mgbata.
Clever oditi na-kpọmkwem haziri otú i nwere ike n'otu n'otu mejuputa Atụmatụ na n'ezie ịdọrọ mmasị gị. Naanị ihe ị chọrọ. N'otu pịa.
Mma gị na mkpọsa. Nịm ọhụrụ ihe mgbaru ọsọ.
Lelee mkpọsa Google Ads ozi Google Ads Ozi Google Ads gị kwa oge na oge iji hụ ihe ndụmọdụ Clever Audit na-enyere gị aka imeziwanye arụmọrụ gị. Ruo mgbe i ruru ihe mgbaru ọsọ gị.
Na-ebuli mkpọsa mgbasa Google Ads gị ebe ọ bụla.
Jiri Clever Audit n'ọfịs, na ọ laa, ma ọ bụ n'ụsọ osimiri. Ezubere nke a Google Ads iji gosipụta nke ọma na ngwaọrụ mkpanaka na mbadamba. Ugbu a, ị nwere ike imeziwanye Google Ads gị naanị na mkpịsị aka gị.
Ọnụ ọgụgụ gị mkpọsa na-eto eto gị uru.
Ozugbo ị ruru arụmọrụ Google Ads ozi kachasị elu, ọ bụ oge ịba ụba, too ma mepụta mkpọsa iji ruo ndị ọhụrụ. Ihe niile ejiri njikwa Clever Audit.
"Ngwaọrụ nyocha Google Ads Audit a dị mfe nghọta na iji. Ọzọkwa, enwere m ike itinye mgbanwe ahụ ozugbo site na dashboard nke na-echekwa m ọtụtụ awa ọrụ. Ọ ka mma ROAS m mma!"
"M nwere obere uwe ahia ahia na obodo m, na Google Ads sales na abawanye karisia ebe m na-ebuli ha na Clever Ads . Ugbu a amaara m ihe anaghị arụ ọrụ na atụmatụ Google Ads m na enwere m ike ịme ihe ọ bụla."
"Clever Ads nyocha m Google Ads mkpọsa n'otu ntabi na free! Ihe kachasị amasị m bụ na m nwere ike ịchọpụta mgbasa ozi ga - aba uru karịa, ọ na - enyere m aka ijikwa ego m."
Bido ikwalite mkpọsa mgbasa ozi Google Ads gị
Nweta a FREE oditi ugbu a
Anyị na-eche banyere gị data nchebe. Lelee anyị amụma nzuzo.
Enwekwu banyere Nyocha Clever Ads Ozi Clever Ads Ozi
Mụtakwuo maka ngwa ọrụ ga - enyere gị aka ịpịpụta mgbasa Google Ads ozi Google Ads gị
Ntugharị Google Ads Audit nke Clever Ads ga-egosi gị ebe ị kwụ na otu ị si enweta mgbasa ozi Google Mgbasa ozi kachasị mma. Anyị ga-eme nyocha Google Ads zuru oke nke mkpọsa gị ozugbo, ma gwa gị ihe ịkwesịrị iji melite iji nweta nsonaazụ kacha mma.
Save oge na ego
Clever Ads Ebumnuche iji nyere gị aka ịchekwa ego site na ịgwa gị mgbe ị na-emefu ego na ụfọdụ isiokwu, ebumnuche gị abụghị nke kachasị, akara ogo gị dara ogbenye, ma ọ bụ nsụgharị ntụgharị gị anaghị arụ ọrụ n'etiti ọtụtụ nsogbu ndị ọzọ.
Ọ ga - enyere gị aka ịkọwapụta ohere ma tụọ aro ịgbakwunye mkpụrụ okwu ọhụrụ na - agbanwegharị dị mma, melite ndọtị gị, mepụta ụdị mkpọsa ọhụụ, ma ọ bụ ọbụlagodi ads gị na mgbakwunye. Kwụsị igbu oge nke oge gị na-enyocha mkpọsa gị na otu mgbasa ozi iji nweta nsonaazụ ndị ahụ. Setịpụ ihe mgbaru ọsọ ma anyị ga-agwa gị otu esi aga ebe ahụ.
Na-edu ndú dị nnọọ otu click
Ihe nyocha Google Ads Audit enye gị ohere itinye aro ọ bụla na akpaghị aka naanị na ịpị naanị. You'll ga-enwe ike ịbawanye na ibelata ọnụ, mepụta mkpọsa ọhụụ, mgbasa ozi na mgbasa ozi mgbasa ozi, ma melite ebumnuche gị. All na-enweghị abanye Google Mgbasa ozi esighi na interface, ozugbo anyị Google Ads Audit dashboard.
Etu ị ga-esi nweta ọtụtụ uru sitere na Nyocha Clever Ads
Ihe Google Ads nwere ike ịbụ ọhụụ ọhụụ. Were Google Ads a na akpa gị ka ị nwee ike ijikwa mkpọsa gị mgbe niile. Dị ka ị nwere ike ịma, Google Ads abụghị ọrụ otu oge, ị ga-ewu usoro gburugburu ya ma lekwasị anya na arụmọrụ nke mkpọsa gị. Google na-atụ aro ka ịme Google Ads dịkarịa ala otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ n'ọnwa.
Ga-eme kwa ọnwa njikarịcha
Google Ads Audit anyị siri ike, ịgaghị echetakwa ime nke a. Anyị ga na-echetara gị ka ị na-eme nyocha Google Mgbasa ozi site n'oge ruo n'oge, yabụ, ihe ị ga - eme bụ ịbanye n'elu ikpo okwu ma mee nyocha Google Mgbasa ozi ọhụụ na otu pịa. Mgbe ahụ ị ga - enweta ndenye aha na atụmatụ Google Mgbasa ozi zuru oke dịka ihe ha nwere na mkpọsa gị. Anyị na-akwado gị ka ị tụlee ndụmọdụ ndị nwere nnukwu mmetụta na mbụ, ma ozugbo ị tinyere ndị nke masịrị gị, gaa maka ndị na-ajụ ase na ndị dị ala.
Na kaadị ndụmọdụ ọ bụla, ị ga-ahụ nkwanye akọwapụtara yana ozi gbatịrị agbasa banyere ya ka ị wee bulie mkpọsa gị mgbe ị na-amụtakwu banyere isiokwu ahụ. Anyị chọrọ iduzi gị mgbe ị ghọrọ ọkachamara Google Ads . Ọtụtụ ndụmọdụ dị njikere iji nke pụtara na ị ga-enwe ike itinye ha n'ọrụ naanị site na ịpị bọtịnụ.
Oge ọzọ ị ga - eme nyocha Google Ads Audit ị gaghị enwe naanị ndụmọdụ ọhụụ iji mee ka mkpọsa gị ka mma, mana ị ga - enwe ike ịlele ọganihu gị ma e jiri ya tụnyere nyocha gara aga ka ị wee mata mmetụta na ndụmọdụ ndị emejuputara nwere na mkpọsa gị.
Inwe mkpọsa mgbasa Google Ads gị kachasị mma na-ewe oge na ndidi, mana ọ bụghị ọzọ ma ọ bụrụ na ịnwe Google Ads Audit dị ka onye gị na mpụ. Oge bụ ego - ọ bụ ya mere anyị ji enyere gị aka ịbawanye uru nke oge gị yana ịlaghachi na dollar ọ bụla ejiri.
Gini mere iji jiri Clever Ads ?
Na Clever Ads anyị dị mpako Premier Google Partners, yabụ ị nwere ike ijide n'aka na usoro niile dị 100% na nchekwa, na anyị na-asọpụrụ nzuzo gị. Anyị enyerelarịrị azụmaahịa karịa 100,000 aka ịkwalite atụmatụ Google Ads na arụmọrụ yana nsonaazụ ọma.
Anyị agbanweela ihe siri ike ma na-ewe oge, dị ka ihe ọsọsọ, dị mfe, ma nwee obi ike sị anyị bụ ihe ọchị. Ga - enwe ike “igwu egwu” site na ndụmọdụ dị ka a ga - asị na ọ bụ egwuregwu, yabụ ị ga - enweta akara kachasị - yana ROI - tupu ị mata ya. Oge niile ị na-amụtakwu ịghọ onye maara ihe na nwee ahụmịhe azụmaahịa na usoro ahụ. Iji Clever Ads , ị ga-mgbe niile mara ihe na-eme ọzọ dị ka ị pụrụ ịdabere na anyị maka enyemaka gị ọzọ nzọụkwụ.
Ọhụụ anyị bụ na azụmaahịa ọ bụla nwere nha na mmefu ego ọ bụla kwesịrị ịnwe ohere ịnweta mgbasa ozi na Google. Ọ bụ ya mere anyị ji Google Ads Audit a na - akwụghị ụgwọ maka obere azụmaahịa ka ha nwee ike ịsọ mpi na aha nha anya megide ndị egwuregwu buru ibu na mmefu ego zuru oke. Ọ baghị uru n ’ihe kpatara ị chọrọ ị nyochagharị mkpọsa gị: ma ị na-eche na mkpọsa mgbasa ozi Google gị nwere ike ịka mma, ma ọ bụ chọọ ịlele ma ụlọ ọrụ azụmaahịa gị ọ na - arụ ọrụ kachasị mma, ma ọ bụ ikekwe ị chọrọ ịmata banyere ma ọ bụrụ na ịrụsi ọrụ ike gị na-akwụ ụgwọ, Clever Ads bụ ngwá ọrụ gị.
Ke adianade do, anyị ìgwè ndị ọkachamara dị njikere mgbe nile inyere gị aka, na ị nwere ike mgbe niile kpọtụrụ ha na ajụjụ ọ bụla, nchegbu, aro, ma ọ bụ aka gị nwere ike nahi@cleverads.com
Uru ọzọ ị na-eji Clever Ads Audit bụ na ị nwere ike ịnweta ọtụtụ ngwaahịa ndị ọzọ na dashboard Clever Ads , yabụ ị nwere ike ijikọ ike Google Ads Audit na ngwaọrụ ndị ọzọ ga - enyere gị aka ịmepụta ụdị mgbasa ozi Google ọhụụ na - akpaghị aka, mepụta ọkọlọtọ ọhụrụ maka gị azụmahịa, ma ọ bụ chọta echiche ọhụụ ọhụụ n'etiti ihe ndị ọzọ. Ngwakọta niile nke Google Mgbasa ozi Mgbasa ozi dị njikere ịrụ ọrụ niile mgbe ị na-etinye oge gị n'ihe kachasị mma, na-agba ọsọ ma na-achịkwa azụmahịa gị.
Anyị na-eche banyere gị data nchebe. Lelee anyịamụma nzuzo.
Anyị ga-arịọ gị ka ị banye na akaụntụ Google Ads gị iji nyochaa ya ma nyochaa ya ka anyị nwee ike ịnye gị ndụmọdụ ahaziri iche iji nweta ọtụtụ mgbasa ozi gị. Anyị na-eji data nzuzo akpọrọ ihe ma na-anakọta ihe anyị kwesịrị iji nye gị ahụmịhe kachasị mma.